Nei paine Email yakawanda muInbox yako zvekuti HAUDI KUVERENGA. | Martech Zone
Nei paine Email yakawanda muInbox yako zvekuti HAUDI KUVERENGA.
Svondo, May 13, 2007 Mugovera, Kubvumbi 16, 2016 Douglas Karr
Nhasi, eROI yakaburitsa chidzidzo pane ongororo yavakaita kune vanopfuura mazana maviri vevatengesi veemail. Ini pachangu ndinofunga kuti mhedzisiro yacho inoodza moyo - ingangoita inotyisa. eROI yakabvunza vatengesi veemail izvo zvavaifunga kuti zvainyanya kukosha. Heino mhedzisiro:
IMHO, Ndiri muchibvumirano chakazara nezvinhu zvepamusoro zviviri. Kukosheswa uye Kununurwa kwakakosha… kuendesa meseji chaiyo kuinbox kunofanirwa kuve kwako kwakakosha zvinhu. Email dhizaini uye zvemukati inyaya yako, Kununurwa kunogona kuvandudzwa nekushanda neyepamusoro email sevhisi webasa.
Iyo yepazasi 3 inoratidza humwe hunhu hunotyisa uye inonongedzera kuzvinhu zvakakosha neemail Marketers nhasi. Email Kushambadzira kunofanirwa kuve 'meseji chaiyo' kune 'vanhu chaivo' panguva 'yakakodzera'. Zvakanaka kana iwe uri kutarisa nguva yako yese pane zvemukati, asi urikutarisawo izvo zvemukati kune vanhu chaivo kuburikidza nechikamu chakakodzera kana zvine simba kugadzira zvinyorwa mukati meemail zvichibva kune vaverengi vako? Uri kuisa iyo email muinbox yavo apo zvichave zvakanyanya kukanganisa?
Yepamberi email vatengesi vari kucherechedza kuti kutengesa kana kukonzereswa kutumira ndiwo mukana unoshamisa wekushambadzira. Pane zvikonzero zvishoma zveizvi:
Munhu akanyorera akatanga kutaurirana. (munhu chaiye)
Anonyorera ari kutarisira mhinduro. Kwete chete ivo vari kuzvitarisira, ivo vari kuzvida izvo! (nguva chaiyo)
Meseji yakanangiswa kune chaicho chiitiko kana chidimbu chemukati. (iwo meseji chaiyo)
Chero bedzi nzira yekutanga yekutaurirana iri yekupindura kunyorera kwako, mikana yekukwirisa inogona kuverengerwa mune iwo meseji pasina chinodikanwa chekubuda-kunze chinongedzo (mameseji ekutengeserana anosarudzika UNOGONA-SPAM.
Meseji chaiyo, Nguva Yakakodzera, Munhu Akarurama
Heino muenzaniso: Ini ndakatenga isina waya router. Mune email yekusimbisa, ndinofanirwa kunge ndichiwana meseji inosimbisa kutengesa kwangu, inoisa ruzivo rwangu rwekutenga UYE inondipa Yekutumira Mahara kana ndikada kuwedzera kadhi isina waya isina waya yekombuta yangu ine nhare yekuita chiito icho chinopihwa chinopera mumazuva gumi . Pamwe pane kupihwa kwekuwedzera kune iko iko kutumirwa kana ndikaraira mukati meawa!
Dambudziko, chokwadika, kazhinji iro iro sisitimu inotsanangura chiito pane kuita zvinopesana. Isu tine hurongwa hunosundidzira vatengesi veemail kumazuva ekupedzisira kuti vabudise tsamba rekunyorera kunze kwemisi yakatarwa yekusvikira imwe vhoriyamu yekuvhura, kudzvanya uye kutendeuka. Saka vatengesi veemail vanoita izvo zvavanoudzwa… ivo vanopwanya zvimwe zvemukati izvo blandly inoedza kushandisa kune yavo rondedzero uye ivo vanowana iyo email kunze nenguva yekupedzisira.
Mhedzisiro yacho yakatonyanya kuipa, apo isu tichienderera mberi nekuzadza iyo inbox, vanyori vanobhadhara kushoma kutarisisa zvachose kune email mameseji. Ini ndaikurudzira vese Email Vashambadzi kuti vaverenge Chris Baggott naAli Sales 'bhuku - Email Kushambadzira neNhamba kudzidza zvakawanda.
Tags: Email Marketingtsambambozha personalizationemail unyoreemail nguvarinotengeswa nevaridzizvakakonzera maemailemail isina kuverengwa
Mitsanangudzo: Chii chakafa uye DITO chinomirira?
Amazon yakanaka pane iyi "Right Message, Right Time, Right Person" pfungwa. Ivo vanoshandisa zvinhu zvawatotenga kuti vakunange iwe neemail ads zvinoenderana nekutenga ikoko kana paine kutengesa / kushambadza.
Izvo zvataurwa, iyo system haina kukwana. Ini nguva pfupi yadarika ndakatenga air compressor, uye pane kunanga ini nemidziyo, vanoramba vachiedza kunditengesera imwe air compressor!
Ini ndinobvuma Slap, kunyangwe iyo email dhizaini yavari kushandisa yakaipa - kurudziro yavo yepamhepo yakanaka. Ndinofarira kutenga kwandinoita bhuku uye vanouya ne 'izvo vamwe vanhu vanoverenga bhuku iro vari kuverenga'. Chinhu chimwe chete ndechekuti pandinotengera mumwe munhu chipo - ipapo ndinogara ndichiwana kurudziro pachipo ichocho! Ndinoshuva kuti vaizosefa zvipo kubva mualgorithms.